Madaxweynaha Soomaaliya Oo La Kulmay Guddoomiyaha Hay’adda Xiriirka Caalamiga ee Japan (JICA) Iyo Mas’uliyiin Ka Tirsan Midowga Yurub.”Sawirro” | Radio Muqdisho
Madaxweynaha Soomaaliya Oo La Kulmay Guddoomiyaha Hay’adda Xiriirka Caalamiga ee Japan (JICA) Iyo Mas’uliyiin Ka Tirsan Midowga Yurub.”Sawirro”
Published on June 2, 2013 by Cilmi Waare · 5 Comments · 5,714 views
Yokohama, 02 June 2013 – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta kulan gaar ah la qaatay Akihiko TANAKA oo ahGuddoomiyaha Hay’ada Xiriirka Caalamiga ee Japan (Japan Internatioanal Cooperation Agency (JICA)). Labada mas’uul ayaa ka wada hadlay go’aankii Ra’iisul Wasaaraha Japan Shinzo Abe ee ahaa in Soomaaliya si toos ah kaalmada Japan loo siinayo Dowladda iyo mashaariicda horumarineed ee Somalia u baahantahay.
Mr Tanaka ayaa marka hore uga mahadceliyey Madaxweynaha Soomaaliya booqadiisha dalka Japan iyo ka qeybgalka shirka TICAD V oo maalmahan ka socda magaalada Yokohama ee Japan iyo horumarka Somalia ay maanta ka gaartay dhanka siyaasadda amniga iyo xasilinta dalka.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isna sidoo kale u mahadceliyey marti-gelinta Japan ay u fidisay iyo hoggaanka saliimka ah ee ay ka qaadatay arrimaha Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sidoo kale uga mahadceliyey dowladda Japan gaar ahaan Ra’iisul Wasaare Abe go’aankiisa ahaa in xiriirka Japan iyo Soomaaliya dib loo soo nooleeyey oo Japan ay si toos ah ula mucaamileyso Dowladda Soomaaliya.
Madaxweynaha ayaa warbixin kooban siiyey Guddoomiyaha JICA ee ku wajahan xaaladda dalka gaar ahaan mashaariicda shacabka Soomaaliyeed ay sida deg-dega ah ugu baahanyihiin si horumarka ka bilowday Soomaaliya loo sii ambaqaado. Madaxweynaha ayaa sheegay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay u baahan yihiin tababaro xirfadooda shaqo siyaadisa isla markaana nolol u abuurta iyo mashaariicda dib u dhiska oo iyagana shaqo abuuris u sameyn kara shacabka Soomaaliyeed.
Ugu danbeyntii Guddoomiyaha JICA ayaa ballanqaaday in iskaashi toos ah oo xagga mashaariicda ay la sameynayaa dowladda Federaalka Soomaaliyeed, in tababaro shaqaalaha dowladda ee dhanka maamulka iyo maareynta la siin doono, in dhismaha macadyada tababarka farsamada la hirgelin doono iyo in dib u dhismaha iskuulada, Isbitaalada, waddooyinka iyo kanaalada beeraha intaba laga hirgelin doono Soomaaliya.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale maanta kulamo gaar gaar ah la yeeshay Madaxweynaha South Afrika oo uu kala hadlay xiriirka labada dal, iyo sidii Soomaalida degen South Africa ay ammaankooda loo kafaalo qaadi lahaa.
Xasan says:	June 2, 2013 at 5:51 pm	Madxweyna noolaaw waa kii umad uhor seedi lahaay barwaaqo guuleyso madax weyne
Reply »	wadanjaceel says:	June 3, 2013 at 1:36 am	madaxweyneheyniyoow guusha allaha kuu badiyo wixii wanaagga iyo horumarka kasoo horjeedana allaha soo hanuuniyo. aamiin
Reply »	Dayran Omar says:	June 3, 2013 at 3:09 pm	Waa guul iyo horumar
Reply »	farah yusuf sulieman says:	June 10, 2013 at 7:18 am	dadka nolol uraadi madaxweyne anana waan kula shaqeynaynaa waa balan
Reply »	mohamed yare says:	July 26, 2013 at 5:19 pm	ilaahey haku dhowro